Ayadoo la ilaalinayo maslaxadda caafimaadka iyo nabadgelyada dadweynaha inta lagu jiro khalalaasaha COVID-19, Maxkamadda Magaalada Seattle waxay u furantahay dadweynaha ayadoo hawlfulinnada la yareeyay sida waafaqsan Amar Maamuleedka Guud 2020-09. Dadka soo booqanaya waxaa waajib ku ah xirashada af-dabool waqti kasta waana in looga fiiriyo heerkulkooda iridka dhismaha maxkamadda.
Macaamiisha ilaalinta ku-jira uma baahna in ay iska xaadiriyaan dhismaha maxkamadda xilligaan, illaa si gooni ah loola soo xiriiray oo lagu yiri isxaadiri mooyaane. Hadii aadan la hadlin la-taliyahaaga intii ka dambeysay xiritaankii maxkamadda Maarso 16, 2020, fadlan wac oo u duub farriin faseex ah adigoo sheegaya magacaaga iyo macluumaadkaaga xiriirka. Soo wac (206) 684-7840 haddii aadan haysan macluumaadka xiriirka ee la-taliyahaaga. Waxaa sidookale iimeel u soo diri kartaa jason.grant@seattle.gov.
Maxkamadda Magaalada Seattle waxay dib u bilaabeysaa maxkamad-qaadisyada xeer-beegta laga bilaabo Agoosto, 26, 2020. Haddii aad dareemeysid calaamadaha COVID-19 sida qandho ama qufac, xiriir dhaw la sameysay qof qaba COVID-19, ama aad ku jirtid koox khatar sare leh oo aad jeceshahay adeeggaaga dib in loo dhigo, fadlan soo wac (206) 684-5688 ama soo iimeel-garee smcjuryduty@seattle.gov. U booqo seattle.gov/courts/jury warbixin dheeraada.
Maxkamaddu maxay sameynaysaa si ay u nabadqabaan booqdayaasha?
Mudnaanteena ugu sarreysa waa caafimaadka iyo badqabka dhammaan dadka soo gala dhismaha maxkamadda. Dadka soo booqanaya iyo shaqaalaha waxaa waajib ku ah xirashada af-dabool waana in looga fiiriyo heerkulkooda iridka dhismaha maxkamadda. Si lagu wado kala-fogaansho bulsho, raacayaasha wiishka waxaa lagu koobay labo qof, isticmaalayaasha musqushana waxaa lagu koobay hal qof markiiba.
Waxaan yareynay tirada qolalka maxkamadda oo shaqeynaya markiiba si lagu yareeyo tirada dadka ku jira dhismaha maxkamadda. Gaashaamo muraayadda balaastiga ah baa lagu rakibay meelaha adeegga iyo goobaha kale ee dhismaha maxkamadda oo dhan.
Nidaamka sifeynta hawada maxkamadda waa la hagaajiyay si gudaha loo soo geliyo hawo bannaan cusub oo badan, si waafaqsan hagidda CDC. Shaqaalaha waxay nadiifiyaan meelaha aadka loo taabto sida gacanka albaabyada maalin kasta.